Baradhada sii kordheysa ee Jamhuuriyadda Kazakhstan - majaladda "Nidaamka Baradhada"
Baradhada ka baxda Jamhuuriyadda Kazakhstan
Qeybtaan, waxaan marwalba la wadaagnay macluumaad ku saabsan sida baradhada u sii kordheyso qeybaha kala duwan ee Ruushka. Laakiin markan waxay go’aansadeen inay ka gudbaan xuduudahoodii caadiga ahaa dhinac walba waxayna u hibeeyeen qayb muhiim ah oo arinta ka mid ah Kazakhstan - deriska koonfureed ee Ruushka, oo aan waligiis qaban cinwaanka "dal baradho koraya" taariikhda, laakiin ku guuleystey inuu ka leexdo soo dejiye weyn oo u dhoofiyo baradho waqti aad u yar.
Kairat Bisetaev, Guddoomiyaha Guddiga
Midowga beeralayda baradhada iyo khudradda Kazakhstan
Kairat Bisetaev, Gudoomiyaha Gudiga Midowga Baradhada iyo Khudaarta Beeraleyda ee Kazakhstan, wuxuu ka warramayaa sida waddanku ugu guuleystey inuu ku guuleysto guusha noocan oo kale ah iyo howlaha weli u baahan in la xalliyo.
Ku saabsan guulaha iyo wax yar oo ku saabsan tirakoobka
Kazakhstan had iyo jeer waxay ku tiirsan tahay soo dejinta baradho. Waqtiyadii Soofiyeeti, waxaan ka helnay baradho Belarus, xilligii Soofiyeeti kadib - wadamada deriska ah.
Warshadaha baradhada waxay heleen dhiirigelin culus oo xagga horumarka ah sanadihii 5. Waqtigaan, dib u soo kabashada guud ee dhaqaalaha waxay ka bilaabatay Kazakhstan waxaana la fuliyay siyaasad deyn karti leh: ilaha dhaqaalaha waxaa la soo saaray 7-4 sano sanadkii 2008% sanadkii. Barnaamijyada kireysigu wax faa'iido ah kama yarayn. Xaaladaha “lacag raqiis ah” way fududahay in la bilaabo ganacsi, iyo 2010-XNUMX qofku wuxuu ka hadli karaa natiijooyinka ugu horreeya ee la arki karo. In kasta oo xilligaas Kazakhstan ay wali ku tiirsanayd sahayda shisheeye: ilaa bishii Janaayo, baradhada ka timaadda Pakistan, Iran, China, oo aan lagu xusin Kyrgyzstan iyo Russia, ayaa si ballaadhan loo soo geliyay waddanka.
Markii la gaaro 2016-17, beerayaasha baradhada ee Kazakhstan, ayaa markii ugu horreysay taariikhda dalka, ku guuleysatay inay si buuxda suuqa maxalliga ah u siiso wax soo saar iyo barakicinta waxyaabaha laga soo dhoofiyo. Intaa waxaa sii dheer, mugga khidmadaha ayaa suurtageliyay in laga hadlo suurtagalnimada dhoofinta halista ah. Dowladda iyo ganacsigu, dabcan, waxay u aaneyn karaan xaqiiqadan guushooda.
Hadda beeraha beeraha ee dalka (ma tirinayso beeraha shaqsiyadeed ee muwaadiniinta) qiyaastii 25 kun oo hektar ayaa loo qoondeeyay baradhada, aaggan oo dhan wuxuu ku jiraa waraab. Kuwani 25 kun hektar waxay quudiyaan dhammaan dadweynaha ku nool magaalooyinka Kazakhstan, intaas ka sokow, waxaan dhoofin karnaa 200-300 kun oo tan.
Celceliska soo saarista baradhada waa 35-37 t / ha. Waxaan u maleynayaa in tani ay tahay natiijo wanaagsan, shan sano ka hor beeraha badankood waxsoosaarkoodu kama badnayn 30 t / ha, laakiin tan iyo markaas kartida beeralayda baradhada ayaa si weyn kor ugu kacday. Waxaan u maleynayaa in haddii sanadaha soo socda aysan nabarro halis ah soo gaadhin ganacsigeenna "dibedda", celceliska waxsoosaarku wuxuu gaari doonaa 40 t / ha. In kasta oo ay hore u jireen beero dalka guranaaya 50-55 t / ha, haddana waxaan aaminsanahay in tani ay tahay jaangooyada aad loogu baahan yahay in lagu dadaalo.
Wadarta mugga goosashada guud, sida laga soo xigtay xogta rasmiga ah, waxay ku saabsan tahay 4 milyan oo tan oo baradho ah (beeraha noocyadooda kala duwan). Xaqiiqdii, waxaan u maleynayaa, in aan ka badneyn 2-2,2 milyan oo tan. Nasiib darrose, dhaqankii tirinta "qaladaadka" ayaa lagu hayey dalkeenna tan iyo xilligii Soofiyeeti, laakiin mustaqbalka dhow waan ka takhalusi doonnaa: dijital ayaa si firfircoon looga hirgelinayaa waddanka, tirakoobka dhammaan dhulalka ayaa socda. Waxaan hubaa inay tani ka caawin doonto xalinta dhibaatada tirakoobka eexda.
Abuurka sii kordhaya ee ay taageerto Yurub iyo taranka dalab ganacsi
Laga soo bilaabo horaantii 2000s, beeralayda baradhada ee Kazakhstan waxay ku tiirsanaayeen noocyo casri ah oo wax soo saar badan leh oo xul Yurub ah. Hadda saamiga noocyadan kala duwan ee beeraha ayaa ka badan 90%, tiro aad u fara badan oo iniino ah ayaa sanad walba laga keenaa Jarmalka iyo Nederland. Tani dhibaato weyn ayey ku haysaa dalkeenna.
Kazakhstan waxay diyaarisay barnaamij loogu talagalay horumarinta xulashada baradhada iyo soosaarka abuurka, laakiin waxaa loogu talagalay in muddo dheer la hirgaliyo, illaa iyo hadda waxaan ku jirnaa bilowga hore ee jidkan.
Mid ka mid ah howlaha istiraatiijiyadeed ee muhiimka ah ee aan nafteena u hiigsaneyno mustaqbalka dhow waa koror weyn oo ku yimid mugga baradhada iniinyaha laga soo saaray dalkeena.
Kazakhstan waxay leedahay faa'iidooyin dhowr ah oo loogu talagalay horumarinta wax soo saarka abuurka. Annagu nama lihin dhulal (sida, tusaale ahaan, Nederland), taasi waa, ma jiraan wax dhibaato ah oo ku aaddan u hoggaansamidda dalag afar dalag ah. Ku darsiga waxaa ka mid ah cimilo qaaradeed oo xoog leh: jiilaalka qalafsan ayaa gacan ka geysta ka takhalusidda cudurro badan oo jeermiska keena, xagaaga qallalanna waxay sahlaysaa in la xakameeyo cudurrada bakteeriyada iyo fungal. Markaan xisaabta ku darsanno, waa iska cadahay in waxoogaa hooseeya (ka yar dalal badan oo Yurub ah) kharashyada aan ka heli karno midho caafimaad leh oo tayo sare leh.
Waxaan rajeyneynaa inaan soo jiidanno dareenka breeders-ka yurub si aan si wadajir ah ugu kobcino noocyada yurubiyanka ah ee baradhada abuurka dhulkeena, ka dibna ka iibino kaliya ma ahan Kazakhstan, laakiin sidoo kale wadamada Bartamaha Aasiya iyo Ruushka.
Tallaabooyinka qaarkood ee jihadaas ayaa durba la qaaday. Sidaa darteed, wafdi ka socda Kazakhstan (wakiillo ka socda ganacsiga, Wasaaradda Beeraha) ayaa booqday Nederland, waxay la kulmeen kuwa soo saara, wakiilo ka socda NAK (Adeegga Kormeerka ugu Weyn ee Nederland ee Tayada Xakamaynta Tayada Abuurka), waxay ka wada hadleen fursadaha iskaashi. Oo waxaan aragnay xiisaha ka imanaya Yurub.
Hadda waa inaan soo marnaa laba marxaladood oo muhiim ah, ka hor bilowga bilowga shaqada wadajirka ah.
Midka ugu horreeya waa inuu ku biiro UPOV (Ururka Difaaca Xuquuqda Daabacayaasha). Midda labaad ayaa ah inaan horumarinno nidaamkayaga caddaynta abuur (waxay ku salaysnaan doontaa nidaamka NAK ee ku habboon xaaladahayaga).
Waan hubaa in waxaas oo dhan ay macquul yihiin, taas oo macnaheedu yahay (oo ka soo horjeedda asalka jawiga maalgashi ee soo jiidashada leh ee Kazakhstan guud ahaan), qorshayaasha isdhexgalka ayaa la fulin doonaa.
Laakiin ka hadalka baahida loo qabo in la soo jiito khabiirada yurubiyanka ah, muhiimada ay leedahay koritaanka noocyada yurubiyanka ee dhulkeena, ma iloobi karno xulashadeena. Hadda 36 nooc oo baradho ah ayaa la geliyay Diiwaanka Guusha Taranka ee Kazakhstan. Waxaan dooneynaa inaan balaarino liiskan, laakiin noocyada cusub ee Kazakhstan waa inay noqdaan kuwa la barbardhigi karo astaamaha kuwa ajaanibta ugu fiican.
Baradho noocee ah ayey soo saarayaasha beeraha casriga ahi rabaan inay ka baxaan Kazakhstan?
Marka hore, waxaan u baahanahay noocyo hore iyo bartamihii-hore - tani waa codsi ka yimid beeraha ku yaal gobollada waqooyiga ee Kazakhstan (halkaasoo ay ku yaalliin ganacsiyada ugu waaweyn "baradhada"). Waxaan ogaanayaa inaysan jirin noocyo noocan oo kale ah sababo taariikheed awgood: Machadka baradhada iyo khudradda ee Kazakhstan waxay ku taal Almaty, taas oo ah, koonfurta dalka. Saynisyahannada machadkuna waxay had iyo jeer diiradda saareen noocyo loogu talagalay wax-soo-saarka koonfurta.
Marka labaad, noocyo hilib jaalle ah ayaa suuq looga baahan yahay, tani waa isbeddelka 7-8 sano ee la soo dhaafay.
Sidoo kale liiska tayada lagama maarmaanka u ah sheyga waa soo saar sare, soo bandhigid heer sare ah (noocyo badan oo gudaha ah ayaa caan ku ah dhadhanka aadka u fiican, laakiin isla mar ahaantaana leh diir aan sinnayn iyo indho qoto dheer, taas oo ka hortageysa baradhada Kazakh inay la tartanto kuwa Yurubta ah), tayada ilaalinta wanaagsan, iska caabbinta cudurrada iyo cayayaanka.
Tanina maahan kaliya rabitaanka beeraleyda, laakiin ficil ahaan waa barnaamij waxqabad.
Bishii Janaayo 2020, wakiilo ganacsi ayaa ka qeyb galay markii ugu horeysay kulan ay yeesheen Golaha Tacliinta ee Machadka baradhada iyo khudradda ee Kazakhstan. Madaxda shirkadaha beeraha waxay fursad u heleen inay ka hadlaan baahidooda isla markaana ay wax ka bedel ku sameeyaan qorshaha shaqada ee kuwa soo saara beeraha sanadaha soo socda. Waxaan rajeynayaa in ka shaqeynta wadahadalka, aan heli doono natiijooyin wanaagsan.
Sidaan idhi, seddexdii sano ee la soo dhaafay Kazakhstan, dhalidda baradhada ayaa si daran u kordheysay. Laakiin tilmaamayaasha la gaadhay maaha xadka, waxaa lagu kordhin karaa ugu yaraan hal jeer iyo badh, taas oo macnaheedu yahay in 400-450 kun oo tan oo alaab ah la heli karo xitaa iyada oo aan la kordhin aagga. Xaaladda ugu weyn ee tan waa abuur tayo sare leh oo noocyo wax soo saar leh.
Dhulka iyo biyaha oo ah kuwa ugu weyn ee keena koritaanka
Si kastaba ha noqotee, aaggu sidoo kale wuu kordhi doonaa. Kazakhstan waxay leedahay dhul bilaash ah oo laga ganacsado iyo ilo biyo ku filan oo lagu sii wado horumarinta waraabka.
Baradhada ka baxda Kazakhstan waa mid ka mid ah kuwa hoosaadka dhirta sii kordhaya ee si dabiici ah u kobciya iyadoo la eegayo ganacsiga. Marka beeraha ay noqdaan kuwo soo jiidasho leh, maalgashadayaasha dibedda marka hore waxay rabaan inay maalgashadaan waraabka, iyagoo ogaanaya in geedka beeraha oo dhan ee Kazakhstan uu ku yaal aagga beeraha khatarta ah. Xilliga sii kordhaya oo dhan (laga bilaabo guga ilaa bisha Agoosto oo loo dhan yahay) waddanka, celcelis ahaan, 50 illaa 150 mm roobab ayaa soo dhaca, marka waraabintu waa badbaadadeenna. Marka, soo jiidashada beeraha ee Kazakhstan waxaa lagu xukumi karaa horumarinta waraabka.
Maantana barnaamij gaar ah oo dawladeed oo loogu talagalay horumarinta ilaha biyaha iyo waraabka ayaa la qaatay. Hadda dalka waxaa ku yaal qiyaastii 1200-1300 kun oo hektar oo waraab ku hoos jira, marka la gaaro 2027 hawsha ayaa ah in la labanlaabo aagaggan, waana arrin macquul ah.
Oo hadday dadku soo bandhigaan waraabinta, markaa ugu horreyntii waxay rabaan inay beero baradhada iyo khudradda borsch set, maxaa yeelay dalagyadan ayaa bixiya soo noqoshada ugu sarreysa (gaar ahaan qaybta woqooyi ee Kazakhstan, halkaasoo aan ku leenahay ilaha biyaha ugu badan).
Kaydinta Suuqa gudaha waxaa la siiyaa baradho 10 bilood sanadkii
Ma dhihi karo Kazakhstan waxay 100% xalisay arinta keenida tas-hiilaad baradho casri ah. Waxyaabo badan baa inala gudboon. Si kastaba ha noqotee, beeralaydu waxay si buuxda u siiyaan suuqa gudaha barandho tayo leh laga bilaabo bartamaha bisha Luulyo (laga bilaabo bilowga goynta baradho hore) illaa Abriil oo loo dhan yahay.
May waa la xiri lahaa dhib la'aan. Laakiin waqtigan, baradhada cusub ee ka soo jeeda Uzbekistan badanaa waxay bilaabaan inay noo yimaadaan, mana jirto wax macno ah in lala tartamo iyaga iyo wax soo saarka dalagii hore. Laga bilaabo bartamaha Maajo illaa iyo bartamaha bisha Luulyo, waxaan ka iibinnaa baradhada cusub dalal badan oo koonfurta ka tirsan waxaanan u maleyneynaa inay taasi caadi tahay.
Iibinta suuqa cawlan
Aniga oo ka xumahay, waxaan xusi karaa in xilligan la joogo ku dhowaad dhammaan baradhada ka soo baxda shirkadaha beeraha ee Kazakh (iyo sidoo kale khudradda borscht) lagu iibiyo suuqyada. Xitaa inta badan silsiladaha tafaariiqda ee Moscow (ugu yaraan 80%) waxay doorbidaan inay ka soo iibsadaan "alaabada wasakhda ah" suuqyada - taasi waa, meelaha aysan ka jirin nidaamyada lacag-bixinta oo macquulna maaha in la raadiyo tirada dhex-dhexaadiyaasha.
Xaqiiqdu waxay tahay in dukaamada waaweyni ay u kala saaraan baradhada inay yihiin badeecado si fudud ugu jira noocyada kala duwan, kuma tiirsanaan faa iidada ka jirta, sidaa darteed waxay ku iibsadaan "iyada oo loo marayo dhinacyada saddexaad." Natiijo ahaan, baradhada tayada leh way ka fog yihiin had iyo jeer khaanadaha dukaanka, in kasta oo lagu soo saaro tiro ku filan.
Dabcan, waxaa jira waxyaabo ka reeban: hal shabakad ganacsi waxay si toos ah uga iibsaneysay baradhada beeraha qeybta ka ah Midowga muddo afar sano ah waxayna tixgelineysaa in badeecadani tahay mid ka mid ah kuwa sida dhabta ah lacagta looga sameeyo. Shabakaddu waxay si karti leh u dhistaa siyaasad qiimeyn, waxay la tartantaa bacadlayaasha, wayna fiicnaataa. Laakiin illaa hadda tani waa tusaale go'doon ah.
Guud ahaan, xaalada marka uu jiro cawl u dhexeeya beeralayda iyo iibsadaha ugu dambeeya ee badeecada, oo si xoog leh u saameeya heerka sicirka, ma ahan mid qancinaya cidna. Qorshahan oo kale kor uma qaadayo dakhliga beeraleyda, wax soo saarkuna wuxuu noqonayaa mid aan fursad u helin dadweynaha.
Waxaan rajeyneynaa in Wasaaradda Ganacsiga ee Kazakhstan ee dhowaan la abaabulay ay gacan ka geysan doonto hagaajinta xaaladda, taas oo si xirfad leh kor ugu qaadi doonta wax soo saarka beeraha - oo ay ku jiraan suuqa gudaha.
Ururka ay ku bahoobeen Baradhada iyo Khudaarta ayaa hada kala shaqeynaya wasaarada cusub dhismaha wadooyin badeecooyin, iyagoo hubinaya hufnaantooda marxaladaha kala duwan. Waxaan dooneynaa in dhamaan kaqeybgalayaasha suuqa ay fahmaan: meesha calaamaduhu ka dhacaan iyo sababta, qiimaha ay alaabtu ku hesho iibsadaha iyo saamiga ay ku yeelato soo saaruhu.
Waa imisa “tigidhka gelitaanka” ee meheraddu, shuruudo noocee ah ayay maalgalintu bixin doontaa? Milicsiga qiimaha baradhada
Kordhinta baradhada waa ganacsi aad u adag oo u baahan maalgashi ballaaran marxaladda bilowga ah. Waxaan u baahanahay qalab gaar ah, qalabka waraabka, keydinta. "Tikidka gelitaanka" waa mid aad qaali u ah. Sida caadiga ah, qof barato baradho bilow ah waa inuu qaataa amaah maalgashi. Waana mid aad muhiim u ah in waqtiga amaahdan la adeegaayo (sida caadiga ah, waa 5-7 sano), suuqku wuxuu u shaqeeyaa si bilaa cillad ah. Taasi waa, beeraleydu waa inay heshaa wax soo saar tayo sare leh oo mug leh, suuquna waa inuu ku iibsadaa badeecadan qiimo u siineysa soo saaraha macaash. Nasiib darrose, kan hore iyo kan labaadba had iyo jeer ma dhacaan.
Marka hore, qofku markuu helo wax kasta oo uu u baahan yahay si uu u bilaabo, badanaa ma haysto wax lacag ah oo uga hartay kharashka socodsiinta. Xaaladaheena, si loo beero dalag wanaagsan oo baradho ah, waxaa lagama maarmaan ah in la maalgeliyo ilaa 1 milyan tenge halkii hektar inta lagu jiro xilliga (isbarbardhigga: marka miraha sii kordhaya, qiimayaashu waa ilaa 1 kun tenge / ha, saliid - 30 kun tenge / ha). Tani waa lacag aad u badan, waana lagama maarmaan in beertu ay si buuxda u iibsato bacriminta, qalabka difaaca, uguna cusbooneysiiso abuurka waqtigiisa. Had iyo jeer maahan oo qof walbaa ma guuleysto. Laakiin haddii qof beeraley ah, lacag la'aan darteed, uu bilaabo inuu fududeeyo tiknoolajiyadda, waxsoosaarkii ayaa hoos u dhacaya, soo saarena ma helayo dakhli u oggolaanaya inuu si caadi ah ugu adeego amaahda isaga dul saaran.
Dhinaca kale, way dhacdaa in beer xoog leh, oo haysata raasumaal ku filan, ay hesho dalag ballaaran oo baradho tayo sare leh leh, laakiin ma iibin karto mid koray macaash ahaan: xaaladaha marka suuqa gudaha uu ka sarreeyo oo ay dhoofintu tahay mid aan degganeyn, qiimaha baradhadu ma bixinayso faa'iido.
Is bedbedelka lacagaha ayaa dhibaatooyin aad u weyn u leh beeraleyda baradhada. Waxaan ka shaqeynaa tikniyoolajiyadda Yurub iyo Ameerika, waxaan iibsannaa badeecadaha iyo iniinyaha ilaaliya dhirta Yurub. Laakiin waxaan ku iibinaynaa inta ugu badan ee goynta dalagga suuqa gudaha. Markay tenge dhacdo, waxay ku dhacdaa faa iidada baradhada si adag.
Waqti aan sidaa usii fogeyn, garaaf ayaa lagu daabacay Kazakhstan, oo ka tarjumaya kor u kaca qiimaha alaabada ee dambiisha macaamiisha 10kii sano ee la soo dhaafay. Inta lagu jiro waqtigan, dalka waxaa soo maray waxyaabo badan: ku soo boodka sicirka sarrifka, sicir bararka. Badeecooyin badan oo muhiim ah ayaa kor u kacay qiimaha waqtiyada qaarkood. Laakiin baradhada ayaa qaadatay safkii ugu dambeeyay qiimeyntan, qiimahoodu wuxuu kordhay kaliya 46%.
Intaa waxaa dheer, markii la sameynayay jadwalka, sababo jira awgood, tilmaamayaasha 2018 lama tixgelin (aad ayey ugu adag tahay beeraleyda baradhada marka loo eego dakhliga soo dhaca). Haddii xisaabta lagu darsan lahaa, markaa kobaca baradhadu waxay noqonaysaa boqolkiiba 20.
Waxaan ku shaqeynaa xaalado marka suuqa uu go'aaminayo qiimaha. Laakiin waxaa muhiim ah in la fahmo in haddii beeraleydu ay si nidaamsan u la kulmaan khasaarooyin, in waddanku mar uun si fudud u lumin karo xoogaa warshad ah. Aniga aragtidayda, mas'uuliyiintu waa inay xakameeyaan xaaladdan.
Waa lagama maarmaan in la horumariyo tarankeenna gaarka ah, in la aasaaso habsocod, in laga fuliyo shaqada dahabka ee suuqyada shisheeyaha - tani waa qaaciddada noo oggolaan doonta in aan xoojinno oo aan horumarinno jihada baradhada ku koraysa dalka.
Dhoofinta Diirad saarida deriska kuugu dhow
Waxaa la ogyahay in koritaanka dalagu uu horseedayo dhibaatooyin waawayn hadii wadanku uusan lahayn nidaam si fiican looga fikiray oo suuq geyn loogu sameeyo dalagyada soo baxay. Marka laga eego xagga aragtida ganacsiga, Kazakhstan waxay runtii u baahan tahay siyaasad ilaalin caafimaad leh si ay ugu dhiirrigeliso alaabteenna suuqyada shisheeye.
Dhamaanteen waan wada fahamsanahay in baradhadu aysan aheyn badeecad adduunka oo dhan laga ganacsan karo. Tani waa badeecad maxalli ah oo baahi weyn loo qabo deriska ugu dhow. Iyagaa haga.
Mid ka mid ah tilmaamaha noogu muhiimsan waa Uzbekistan. Sannad kasta waddankan wuxuu soo dajiyaa 300-400 kun oo tan oo badeecada ah (mararka qaarna ilaa 500 kun oo tan). Isla mar ahaantaana, mugga ugu badan ee sahayda baradho ee ka socota Kazakhstan ilaa Uzbekistan weli kama badin 269 kun tan. Waxaa jira qol lagu koriyo. Goobta juquraafi ahaaneed ee dalkeenna, mugga wax soo saar iyo tayada wax soo saarku waxay noo oggolaaneysaa inaan siinno qiyaastii 300-350 kun tan ilaa Uzbekistan oo leh siyaasad dhoofinta karti leh.
Suuqa Ruushka ayaan ka xiiso yarayn Kazakhstan. Dabcan, baradho badan ayaa ku koray Ruushka: waxaan aragnaa labadaba firfircoonida koritaanka wax soo saarka iyo hoos u dhaca joogtada ah ee soo dejinta. Laakiin wali Ruushku wuxuu iibsadaa baradhada dibedda iyo waxyaabo badan (oo ku saabsan miisaanka Kazakhstan).
Intaas waxaa sii dheer, waa in la ogaadaa in waraabka Ruushka uu si wanaagsan uga horumaro qeybta dhexe ee dalka, laakiin Ural-ka, Galbeedka iyo Bariga Siberia, baradhada inta badan waxaa lagu beeraa waraab la'aan, waxaa jira cillad xagga dalagyada ah, halka dhulalkan ay yihiin suuq si habsami leh awood u leh. Oo waxaan ku aragnaa niche halkan. Marka laga eego dhinaca dhaqaalaha, waa wax aad uga macquulsan in la siiyo baradhada goboladaan laga soo bilaabo gobolada waqooyiga ee Kazakhstan marka loo eego Bryansk ama Chuvashia.
Iyada oo la adeegsanayo hanaan karti u leh saadka, marka la eego faa'iidooyinka gaarka ah ee Kazakhstan u leedahay xubin ka mid ah Bulshada Dhaqaalaha Eurasia, waxaan si wax ku ool ah ula shaqeyn karnaa shabakadaha ku yaal bariga Ruushka. Hadda taas uma samaynno sabab fudud: ma jiro dhexdhexaadiye nagu filan. Waxaan leenahay soo saareyaal soo saara alaab aad u wanaagsan oo yaqaana sida loo keydiyo. Dhinaca Ruushka, waxaa jira iibsadayaal (silsilado tafaariiq ah) oo diyaar u ah inay aqbalaan alaabada oo ay xiiseynayaan. Laakiin keenista alaabada silsiladaha tafaariiqda waa arrin aad u adag, waxaa jira waxyaabo badan oo nuances ah, waa ganacsi gooni ah. Raadinta dad doonaya inay qabtaan waa hawl gaar ah oo aynaan weli xallin karin.
Meesha saddexaad ee loo dhoofiyo waa Shiinaha. Dalkan, geeddi-socodka yareynta dhulka beeraha ayaa si firfircoon uga socda (magaalaynta awgeed, dhismaha shirkado tiro badan oo warshado leh), sidoo kale waxaa jira dhibaatada carrada nabaad-guurka - iyo waxaas oo dhan oo ka dhan ah asalka dadyowga markasta koraya Sannad kasta su'aashu waxay noqotaa mid aad u daran: sidee loo quudiyaa dadka? Saynisyahanada dalka waxay rumeysan yihiin in jawaabta suurtagalka ah ay noqon karto dib u habeyn lagu sameeyo cuntada dadka degan dalka (wax soo saarka ugu weyn waa inuusan noqon bariiska caadiga ah, laakiin waa baradhada kalooriyeyaasha badan leh).
Isla mar ahaantaana, way cadahay in xaqiiqooyinka maxalliga ah, kororka cunitaanka baradhada ee muwaadin kasta, xitaa 1 kg sanadkiiba, ay tahay koror 1,5 milyan tan ah hal mar, taas oo u fureysa rajo weyn oo dhoofiyayaasha. Lama diidi karo in siyaasadda wax ka beddelka cuntada dalka lagu dhaqangelin doono si ka dhaqso badan habka horumarinta aagagga cusub. Kuwa soo saara beeraheena waa inay diyaar u ahaadaan tan.
Dib u warshadaynta. Waxaan ka abuureynaa xoq
Iyada oo la shaqeynayo, wax walba way ka yara adag yihiin illaa hadda.
Sannadkii 2016, Midowga Midhaha Baaradhada iyo Khudaarta ee Kazakhstan waxay ku casuuntay mid ka mid ah geedi socodka baradhada adduunka ugu weyn - shirkad caan ah oo reer Holland ah inay soo booqato dalkeena. Waxaan tusnay wakiillada shirkadda beeraheena, khabiirada takhasusana way ku qanceen wax qabadkeena iyo awoodaheena. Iyo dhawr sano gudahood - kadib markii lagu tijaabiyay noocyo gaar ah dhammaan gobollada dalka - iyo rajooyinkeenna weyn.
Shirkaddu waxay go'aansatay inay warshad ka furto koonfurta dalkeenna, gobolka Almaty, maadaama ay soo baxday inay halkan tahay in baradhada lagu shiilayo shiilanku muujinayo natiijooyinka ugu wanaagsan: cimilada iyo carradu waxay suurtogal ka dhigayaan in la helo wax-soo-saar gaaraya illaa 100 t / ha.
Meeshii laga dhisi lahaa ayaa la go'aamiyey, xaddiga maalgelinta ayaa la isku raacay. Laakiin mashruuca weli lama hirgelin. Dhibaatada ugu weyni waxay tahay in koonfurta Kazakhstan aysan jirin beero waaweyn oo baradho ah oo diyaar u ah inay qaadaan doorka mas'uuliyadda ee alaab-qeybiyeyaasha alaabta ceeriin ee dhirta. Waa lagama maarmaan marka hore in lala macaamilo horumarinta saldhigga kheyraadka. Khabiirada shirkadda ayaa diyaar u ah inay tan sameeyaan, laakiin sannadkan masiibo ayaa caqabad ku noqotay bilowga shaqada.
Aad iyo aad ayaan ugu mahadnaqaynaa bahwadaagtayada in ay dhab ka yihiin arrintan, waxaanan rajeynaynaa sida ugu fiican. Mashruucani waa mid muhiimad weyn u leh dalka: waxay siin kartaa dhiirigelin dhab ah labadaba horumarinta baradhada guud ahaan soo baxda iyo sameynta warshadaha wax soo saarka. Yaanan iloobin in Kazakhstan arintan ay aad uga duwan tahay Ruushka, halkaas oo ay jiraan dhaqamo soo saarida badeecooyinka laga helo baradhada (istaarijka, tusaale ahaan), waxaa jira warshado (inkasta oo ay dhacsan yihiin, ilaa waqtiyadii Soofiyeeti), waxaa jira machadyo cilmi baaris oo u shaqeeya warshadan - taas oo macnaheedu yahay waxaa jira takhasusyo, teknolojiyad iyo khibrad. Waa inaan ka abuurnaa wax walba meel hoose.
Xilliga 2020. Waqtiga soo kabashada
Sannadkan caqabado badan ayuu qof walba la yimid.
Guga waxaa lagu xasuustey soo bandhigid karantiil iyo xuduudihii adduunka oo dhan ka xirmay. Waa inaan ku xurmeynaa dowladdeenna: si ololaha abuurka loo sameeyo, maareynta geeddi-socodka shaqada ee bilaha Maarso, Abriil iyo Maajo waxaa lagu qabtay si ku dhow habka gacanta. Kuxigeen kasta oo akim ah wuxuu si toos ah ulaxiriiraa dhamaan canshuuraha kastamka eek uyaala xadka gobolkiisa, wixii arima ah si deg deg ah ayaa loo xaliyay. Neerfaha ayaa khasaaray, laakiin dhammaan shixnadihii abuurka ahaa ee nooga yimid Yurub ayaa lagu keenay waqtigii loogu talagalay.
Tan iyo bishii Abriil, kuleyl aan caadi ahayn ayaa ka billowday waddanka, kaasoo taagnaa muddo saddex bilood ah. Qoyaanka hawadu waxay gaareen 15%, dhulka waxaa lagu kululeynayay 60 ° C. Waraabinta waxay ahayd in la bilaabo bil ka hor sidii caadiga ahayd. Si kastaba ha noqotee, waxaan helnay goosasho wanaagsan oo baradho ah - marka loo eego tirakoobkii ugu dambeeyay, waxaan ka goosannay qiyaastii 900 kun oo tan oo ah qaybta warshadaha. Tani maahan natiijada ugu sareysa hadii aan isbarbar dhig ku sameyno tilmaamayaasha shantii sano ee la soo dhaafay, laakiin waxay noo ogolaaneysaa inaan siino suuqa gudaha dhoobo la xoojiyay oo aan u dhoofino 250-280 kun oo tan oo kale dibada.
Isbeddelada wanaagsan ee sanadkaan, waxaan ku ogaan karaa qiimaha aadka u sarreeya ee alaabteenna.
Seddexdii sano ee la soo dhaafay, beeraleyda baradhada waxay ku jireen xaalado adag oo faa'iido yar - ku dhowaad eber - iyo in badan oo ka mid ah 2018 waxay ku sii jireen khasaaro daran. Haatan waxaan rajeyneynaa in qiimaha wanaagsan ee sanadkan awgiis aan awoodi doonno inaan "leef leefano nabarradeenna": ka saarno amaahda khaldan, dayactirka qalabka, iyo xoojinta shaqada nafaqada iyo ilaalinta dhirta. Xilligan la joogo fursad uma lihin inaan ka hadalno horumarka, halka aan ka hadlayno soo kabashada.
Hagaag, guud ahaan, taariikhda sameynta baradhada ka baxda Kazakhstan ayaa tusaale mudan u ah isku xirnaanta guuleysiga ee hindisaha gaarka loo leeyahay, jawiga maalgashiga iyo dabeecadda abuurista warshad ficil cusub. Oo kanu waa bilowgii!
Tags: KazakhstanSoosaarka baradhada
Isticmaalka isku darka khudradda barafaysan ee Ruushka laga bilaabo 2016 ilaa 2019 kordhay 3,6 jeer